Thomas Muller: “Chelsea ma’ahan waqti xaadirkan Kooxda ugu fiican Yurub” – Gool FM
(Munich) 24 Feb 2020. Gooldhaliyaha sare ee xulka qaranka Germany ayaa aaminsan in Bayer Munich aysan wax walwal ah ka qabin Chelsea, maadaama aysan ahayn kooxda ugu awoodda badan qaaradda Yurub sida uu qabo.
Chelsea ayaa habeen dambe oo Talaado ah garoonkeeda Stamford Bridge ku soo dhaweyn doonta Kooxda Bayer Munich, lugta koowaad ee wareegga 16-ka tartanka UEFA Champions League.
“Waad rumeysan tahay in aan aragnay dhamman garoomada ugu waa weyn ee qaarada Yurub kaddib 100 kulan oo Champions League, laakiin marnaba kuma ciyaarin Stamford Bridge, runtiina taas waa mid aan hore u eegayay,” Muller ayaa sidaasi u sheegay warsidaha The Athletic.
“Chelsea waxay haystaan ciyaaryahanno yar yar kuwaas oo leh hibo, waana koox tayo leh taas oo ku gubi karta, waxaan u baahanay in aan isku diyaarinno.”
“Lakiin ma’ahan waqti xaadirkan kooxda ugu wanaagsan ee Yurub, mana u baahnin in aan ka cabsano, kalsooni ayaa ku qabaa.”
Kooxaha Bayer Munich iyo Chelsea ayaa si weyn loogu xusuustaa Final-kii Champions Leagea ee sanadkii 2012, iyadoo Bavarian-ka garoonkooda looga qaaday koobka.
Haddaba, mid ka mid ah xiddigihii ka qaaday koobka Munich waxaa ka mid ahaa Frank Lampard, kaasoo hadda macallin u ah Chelsea, Muller oo arrinkaasi la hadlyay ayaana yiri:-
“Wuxuu ciyaarayay kubad dhab ah, farsamo aad u fiican, mid ku sii fiican kubadaha dhaadheer ee khad dhexe oo aad u shaqeyn kara, mararka qaarna qatar ku ah afka hore ee goolka.
“Si fudud wuxuu og yahay ‘kuwaani waa sheeko aad u baahan tahay marka aad rabto in aad guuleysato kulan kubada cagta ah’ runtii wuxuu ahaa ciyaaryahan aan la xiriiray.”